Onyinye nke Mmụọ Nsọ:? Nkpughe, ike, mkpali 
Onyinye nke Mo Nso
Knowmata ihe ha bụ onyinye nke Mọ Nsọ Akwụkwọ ozi Pọl onyeozi degaara ndị Kọrịnt ga-achọrịrị n'akwụkwọ nsọ. N'ebe ahụ, akọwapụtara nke ọma isi nke iri na abụọ, site na amaokwu 12 ruo 8 onyinye ọ bụla ka akọwapụtara.
Onyinye ndi ahu bu onyinye ndi anyi natara, n’ihe gbasara onyinye nke Mo Nso, anyi na ekwu maka onyinye puru iche ndi enyere anyi site na ebum n’uche iji gozie Nzuko Kraist site na nkpughe nke obula.
Enwetaghị onyinye ndị a site n’okwukwe mana enyere ha dịka Nna m na-ahụ mkpa na ọnọdụ nke ndị ya. Ekewara onyinye ndi a ụzọ atọ dịka atụmatụ ha na ọdịdị ha.
1 Nkewa nke onyinye nke Mo Nso
1.1 Onyinye nke Mo Nso: Onyinye nke Nkpughe
1.2 Onyinye nke Mo Nso: Onyinye nke ike
1.3 Onyinye nke Mo Nso: Onyinye nke Inspiration
Nkewa nke onyinye nke Mo Nso
Onyinye nke Mo Nso: Onyinye nke Nkpughe
Onyinye ndia bu iji mee ka mmadu mara ihe ụfọdụ bu nke zoro ezo dika ebumnuche, atumatu ma obu uche Chineke. Onyinye ndia bu:
Ọ bụ onyinye na-enye ohere ịnweta mkpughe pụrụ iche. Ihe atụ doro anya nke onyinye a gosipụtara bụ nke anyị hụrụ n’onwe Jizọs n’onwe ya mgbe ọ na-agwa Peter na n’ihu ụbọ akwara na ọ ga-agọnahụ ya ugboro atọ. (Matiu 26:34)
Okwu mkpughe a nwere ike ibia site na nrọ, ahụụ, am ma obu otu olu nke Dios.
Onyinye onyinye a, mgbe ekpughere ya, anaghị ekpughe ihe ndị ga - eme n’ọdịnihu kama ọ bụ ihe gara aga ma ọ bụ nke dị ugbu a nke anwansi.
En isi nke 4 nke Oziọma Dabere na Saint John, a hụrụ akụkọ nwanyị nwanyị Sameria, nke Jizọs gwara ya na o nweela di ise na onye ọ nwere ugbu a abụghị di ya, nke a bụ ngosipụta doro anya nke ngosipụta nke onyinye a.
Onyinye nke nghọta
O bu onyinye amara nke amara dika ekpughere nke ulo uka Kraist. Site n'onyinye onyinye a ighota ihe bu mmuo nke na aru oru n’ime mmadu n’otu oge.
Onye ozi Pọl gosipụtara anyị ngosipụta doro anya nke onyinye a mgbe o nwere ike ịchọpụta mmụọ nke na-arụ ọrụ na Elimas, a na-ahụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ nke Ọrụ Ndịozi na isi 13 amaokwu 9 na 10.
Onyinye nke Mo Nso: Onyinye nke ike
Kinddị onyinye karịrị nke mmadụ nke na-egosipụta onwe ya iji tolite okwukwe nke ndị kwere ekwe na ime ka ndị na-ekweghị na ike nke Chukwu kwere.
Onyinye nke Ime Ebube
Ọ bụ otu n'ime onyinye ndị dị ịtụnanya n'ihi na mgbe ọ gosipụtara ya, a na-eme ya site na ọrụ ebube karịrị nke mmadụ, ya na ihe ndị mmadụ na-ekwu, na-agaghị ekwe omume.
N’okwu Chineke anyị na-ahụ ọrụ ebube mbụ nke Jizọs bụ ime ka mmiri ghọọ mmanya, ihe onye ọ bụla na-enweghị ike ime, o mere ya ma ju ndị niile nọ ebe ahụ anya. (Jọn 2: 9) Nke a bụ otu n’ime ọrụ ebube a kacha mara amara Jizọs rụrụ.
Onyinye nke okwukwe
Ọ bụ okwukwe nke Mụọ Nsọ na-abụghị okwukwe nke eke mmadụ nwere kama ọ na-aga n’ihu. Obu okwukwe nke n’eduba onye ahu ikwere na ihe anaghi ekwe omume.
N’okwu Chineke ọ gwara anyị gbasara otu nwoke sị na ya juputara n’ike na amara, ya bụ, onyinye nke okwukwe ka emere ka ọ pụta ìhè n’ime ya, nwoke a bụ Stifen na akụkọ ya dị n’akwụkwọ Ọrụ Ndịozi. Ndịozi isi nke isii site n’amaokwu 6 gaa n’ihu.
Onyinye a ka apughariri kari nebe ahu, obu kwa mgbe ebum n’uche di nkpa n’ileputa ahu. N’onyinye onyinye a ji otutu otutu ebe enwere otutu onyinye ogwughari ma obughi otu dika na ndi ozo. N’ikwu ya ozo, mmadu gha enwe ike igosiputa onyinye onyinye ogwugwo, ya mere odighi egosi onwe ya site na igwọ oria oria niile kama ufodu.
Oziọma anọ ahụ na akwụkwọ Ọrụ Ndịozi juputara na amaokwu ndị na-akọ akụkọ banyere ọrụ ebube nke ọgwụgwọ dị ịtụnanya.
Onyinye nke Mo Nso: Onyinye nke Inspiration
Egosipụta onyinye ndị a maka iwulite Nzukọ-nsọ. Ha bụ onyinye na-adọta ọtụtụ ntị ma na-eju anya site na mbido ha na ike ha na-enye mgbe ha gosipụtara.
Ọ bụ otu onyinye a na-akpagbukarị n'ihi na ọ bụ otu ọnụ Chineke ka ọ na-ekwu site n'ọnụ onye kwere ekwe.
Okwesighi inwe mgbagwoju anya na ozi amuma dika ha di iche. Enwere ike iji onyinye a na-agba ume, na-ewuli elu, na-akasi obi, na-akuzi ma na-ekwenye. Onyinye a bu onyinye agha aghaghi iji oru na usoro nihi na o na-ekwu n’aha Chineke.
Resdị asụsụ dị iche iche:
Speakingsụ asụsụ dị iche iche bụ ngosipụta nke mmụọ nsọ, ma mgbe nke a mere, ọ bụ naanị otu ụdị asụsụ ka a na-ekwu.
Mgbe a na-ekwu ihe karịrị otu okike, ọ bụ n'ihi na egosiputara onyinye ahụ. Udi asusu di iche putara ihe site na nzube Chineke, dika ayi huru n’akwukwo ndi ozi nke ndi ozi no isi 2 amaokwu nke 12 rue XNUMX
Mgbe ekpughere onyinye a jiri aru nke onye kwere ekwe ma ihe niile bụ nke uche nke Kraịst.
Onyinye a, dika nke ikpe azu, malitere ihu mgbe amuma nke amara malitere, nke bu oge anyi no n’ime ya. Egosiputa onyinye a inye onyinye maka asụsụ dị iche iche a ga-ekwu mgbe mmụọ nsọ ga na-elekọta Nzukọ-nsọ.
Onyeozi Paul dụrụ ndị Kọrịnt ọdụ ka ha kwuo okwu n'asụsụ dị iche iche mgbe a hụrụ onye ntụgharị ebe ahụ, mana ha ga-eme nwayọ, nke a bụ ebumnuche nke ijigide ihe n'ọgbakọ na ka anyị wee nwee ike ịghọta ozi ahụ na Chineke Ọ chọrọ inye ụka.
Enyere onyinye nke Mo Nso maka atumatu nke Chineke, aghaghi igosiputa ya ka ha we mezuo ebum n’udo n’enweghi nsogbu.
Onye kwere ekwe nwere ike ikwe ka onyinye ahụ pụta ìhè n’oge ọ tụlere ya, n’ihi na ọ ka na -eme ihe masịrị ya ka onyinye ahụ gbasaa ma ọ bụ na ọ gaghị.
Gụọ kwa akụkọ a nwa mmefu y Ihe agha nke Chukwu.
Okpukpe Buddhist - Mara okpukpe a nke ọma